MACLUUMAADKA EYDA MALTESE IYO SAWIRO - EEYAHA
Macluumaadka eyda Maltese iyo Sawiro
Luulka Malta ayaa kugu dhoola cadeynaya
Eyga Libaaxa Maltese
Maltese waa eey yar oo adag oo timo jilicsan leh. Jidhku waa iswaafaqsan yahay, lafo-fiican yahay, laakiin adag oo waxyar ka dheer dhererkiisa oo leh dusha sare. Laabta ayaa qoto dheer. Dhakada wax yar baa lagu wareejiyaa xagga sare oo leh joogsi dhexdhexaad ah. Dherarka dhexdhexaadka ah ee muuska, laakiin maahan meel. Suunka, dhagaha hooseeya ayaa loo dhigay meel u dhow madaxa oo si baalal leh u leh baalal. Indhaha madow way waaweyn yihiin, wareegsan yihiin oo dhex dhexaad u yihiin dhinacyo madow leh. Sanku waa madow yahay sanka oo furan. Eygu wuxuu leeyahay dhar jilicsan oo jilicsan, hal lakab oo ah cadaan fool maroodi ah. Markii la dheereeyo oo loo qurxiyo sida eey show ah, wuxuu ku laalaadaa dherer dherer ah dhinacyada jirka oo u dhow dhulka (qiyaastii 8½ inji (22 cm)), oo sudhan dhinac kasta oo ka mid ah khadka dhexe ee xariiqa mana buuqsana, ama kinky. Dad badan oo milkiileyaal ah ayaa doorta inay jaraan jaakadda oo loo gooyo eey yar oo daryeel fudud ah
Maltese waa ruux, firfircoon oo ciyaar leh. Naxar, kalgacal, kalsooni iyo u heellan sayidkeeda. Caqli sare. Ku fiican barashada tabaha. Geesinimo iyo deg deg u yeerinta alaarmiga haddii ay dhacdo buuq shaki leh. Waa eey saaxiib wehel ah: nimco leh oo la jeclaan karo. Waxay ku fiicantahay xayawaanka kale ee aan kaniisadda ahayn iyo eeyaha kale. Malta waxay jeceshahay inay banaanka ku ciyaarto. Qaarkood waxay jecel yihiin inay ku boodaan balliyada. Waxaa laga yaabaa in adag tahay in guriga la dumiyo . Haddii aad quudiso qashinka miiska, waxay noqon karaan cunno qaateyaal. Ha u oggolaan eeyahaas inay horumariyaan Cudurka Dog yar , dabeecadaha bini'aadanka ee kiciya eeygu aaminsan yahay inuu yahay hogaamiyaha aadanaha. Tani waxay keentaa darajo kala duwan oo ah dhibaatooyinka dhaqanka . Haddii eeygu aamminsan yahay inuu madax yahay, wuxuu la soo wareegi karaa carruurta iyo xitaa dadka waaweyn. Ha ka badbadinin ama ka badbadin eeyahaas yar, waayo iyagu waxay noqon doonaan kuwo aan degganayn, qaarkoodna waxay ka hinaasi karaan dadka soo booqda. Maltese loo oggol yahay inay la wareegaan guriga, iyagoo madax u ah aadanaha, sidoo kale way horumarin karaan kala-go'id walaac , ilaalin iyo ciyey waswaas ah. Kuwani maaha sifooyinka Malta, laakiin waa dabeecado ay keeneen habka eygu ula dhaqmo dadka hareerahooda ah. Dabeecadahaani way bixi doonaan marka eeyga ku hareereysan xasillooni hoggaamiyeyaasha xirmada .
Dhererka: Ragga 8 - 10 inji (21 - 25 cm) Dumarka 8 - 9 inji (20 - 23 cm)
Miisaanka: 6½ - 9 rodol (3 - 4 kg)
jack russell min pin isku qasan eeyo
U janjeera qoraxdu iyadoo timaha lagu kala tagayo, maqaarka, arrimaha indhaha, neefsashada, iyo baraf la siibtay. Qaarkood way adkaan karaan in lagu quudiyo dheefshiidka oo daciif ah. Waxaa laga yaabaa inay helaan qarqaryo, oo waxay la kulmaan raaxo darro xilliga kulul. Malta waa in laga ilaaliyaa meelaha qoyan. Sidoo kale u nugul dhibaatooyinka ilkaha. Quudinta buskudka eeyaha qalalan marka lagu daro cuntadooda caadiga ah waxay ka caawin kartaa ilkaha inay ahaadaan kuwo nadiif ah oo caafimaad qaba.
Maltese-ka waa eey ku wanaagsan nolosha guriga. Iyagu gudaha ayay aad ugu firfircoon yihiin waxayna sameyn doonaan wax hagaagsan iyadoon deyr lahayn.
shaqaalaha amerikankaordordshire terrier feer isku dhafka
Malta waxay ubaahantahay a socod maalinle ah . Cayaartu waxay daryeeleysaa baahiyo badan oo jimicsi ah, hase yeeshe, sida noocyada oo dhan, ciyaartu ma buuxin doonto dareenkooda aasaasiga ah ee socodka. Eeyooyinka aan helin socodka maalinlaha ah waxay u badan tahay inay muujiyaan dhibaatooyinka dhaqanka. Waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan rooti wanaagsan meel aamin ah oo furan oo ka baxsan leedhka, sida barxad weyn oo ood leh. Waxay ku sii ciyaarayaan si da 'weyn. Waxay ku firfircoon yihiin gudaha.
Qiyaastii 15 sano ama ka badan. Way noolaan kartaa illaa 18, laakiin waa muhiim in laga ilaaliyo inay qoyaanka ku sii jiraan.
Qiyaastii 3 ilaa 5 eey
Shanlaynta maalin kasta iyo cadayashada jaakad dhaadheer waa muhiim laakiin noqo mid jilicsan, maadaama jaakadu aad u jilicsan tahay. Nadiifi indhaha maalin kasta si aad uga hortagtid wasakheynta, oo nadiifi garka cuntada ka dib isla sababahaas. Maydh ama shaambo qallaji si joogto ah, adoo hubinaya in xayawaanku si fiican u qallalan yahay oo diirran yahay ka dib. Nadiifi dhagaha, oo soo bixi timaha ka soo baxa gudaha kanaalka dhegtiisa. Indhaha waa in si joogto ah loo hubiyaa loona nadiifiyaa haddii loo baahdo. Timaha madaxa korkiisa inta badan waxaa lagu xiraa guntin si looga ilaaliyo indhaha. Qaar ka mid ah milkiileyaasha xayawaanku waxay doortaan inay timaha gareeyaan si ay u fududaan karaan oo ay u qaadan karaan waqti yar. Maltese-ka wax yar oo timo ah ayey ku daadinaysaa waxayna u fiican tahay dadka xasaasiyadda ku dhaca.
Maltaanka waxaa lagu horumariyey Talyaaniga. Waxaa la sheegay in ay leedahay spaniel gaagaaban iyo Poodle dhiig. Maltaanka waxaa marki uhoreysay loo aqoonsaday inuu yahay nooc ka mid ah Malta, halkaas oo uu ku helay magaceeda. Waxaa mar loo yaqaan 'Ye dog dog of Malta.' Cunnadan waxaa iska leh boqortooyada adduunka oo dhan. Haweenku waxay ku soo kaxeeyeen iyagoo gacmahooda ku jira oo ay kula seexdaan sariirahooda. Waxaa markii ugu horeysay keenay Ingriiska Saliibiyiin dib ugu soo laabtay wadankoodii iyagoo ka yimid badda Mediterranean. Malta waxaa marki uhoreysay aqoonsaday AKC sanadkii 1888.
Gun Ey, AKC Toy
american eskimo jack russell mix
Ey tayo leh oo qof weyn ah oo u dhashay Malta — Sawirka waxaa iska leh David Hancock
'Tani waa Maggie, hal sano jirkeyga Malta. Iyadu waa qof caqli badan, waxayna ku socotaa lugaheeda dambe marar badan. Waxay kaloo ogtahay in markay sariirta gaadho ay waliba tahay lafteedu. Iyadu waa farxad oo annaguna waan haysannaa bartay aad u badan iyada oo loo marayo degelkan ku saabsan tababarka iyada.
Latte foolka maroodiga fudud Maltese saafi ah 3 sano jir
Jellybean ee Malta markay tahay 12 sano jir waxay ka cabaysaa baaquli weyn oo liin dhanaan ah
Jellybean ee Malta markay tahay 12 sano
'Maltese waxaa loo magacaabay Amiir, oo loo yaqaan' NutPup ', oo jira 3 sano-' indhahaaga saar wadada, NutPup. ''
Lilly iyo Gracie qaangaarka Maltese
Nemo reer Malta markuu jiray 1 sano— 'Wejigiisa eey eey ah ayaa hanan kara qalbiga qof walba!'
Shan-jir shan jir ah oo Maltese ah oo yar yar oo hooyadiis ah oo laba sano jir ah
5-wiig jir ah eey Maltese ah
Dumar laba jir ah Malta
adhijirka Australiyaanka ah eey dhallaan ah
Lilly eeygii Malta ee 4 bilood jir— 'Lilly waa Maltese diiwaangashan asal ahaan kasoo jeeda Abbeville, GA. Lilly waxay ku nooshahay guri dabaq ah oo ku yaal Knoxville waxaana iska leh oo jecel arday jaamacadeed waqti-buuxa ah oo ka tirsan Jaamacadda Tennessee Knoxville. Sawiradaan waxay qiyaastii tahay 4 bilood. Aad ayey ugu faraxsan tahay qaab nololeedka guriga, laakiin waxay jeceshahay inay ku orodo oo ay ku ciyaarto meelaha furan, cawska markay kari karto. Aad ayey ugu feejigan tahay guriga waxayna 'yeeri doontaa' haddii ay wax maqasho. Waxay jeceshahay inay la ciyaarto asxaabteeda qashin-wadaagga ah illaa ay ka daalayaan oo ay is dhinac dhigayaan. Lilly waxay buuxisaa booska qoys ee ardayda kuleejka ah waana mid aad u jecel oo u heellan. Waxay jecel yahay in la calaaliyo , sidaa darteed waxyaabo badan oo qalin qaawan ah oo loo yaqaan 'rawhide chewies' ayaa muhiim ah. '
Lilly eeygii Malta ee 4 bilood jirtay
Lilly Malta - 'Hooyadeed, arday dhigata kulleejada, waxay joogtay guriga' Skyping 'markii ay u baahatay inay ka fogaato dhowr daqiiqo. Markii ay ku soo noqotay fadhigii Skype, Lilly ayaa la wareegtay oo la hadlaysa ayeeyadeed iyo ayeeyadeed oo ay xagaagii la noolayd! '
Eeg tusaalooyin badan oo Malta ah
Sawirada Malta 1
Eeyaha Malta: Sawirada Guryaha La Uruurin Karo
khariidado jilicsan oo marooji ah oo wax lagu duubay
nooca eey waa dorkie a
shih tzu pom mix puppy eeyo
chi chi eey yar yar oo iib ah
3 wiig jir cuno cunug ah
iskudhafka Territory isku darka bulldog american